Hisy ny fandalovana amina toerana maromaro iarahany amin’ny Filohan’ny Repoblika ny marainan’ny 26 jona mialoha ny hiatrehany ny lanonana eny Mahamasina. Namboarina ny lalana holalovany, nolokoin’ny fanjakana ny trano 300 eo ho eo manamorona ny arabe, hita eny amin’ny arabe ny sariny sy ny sainam-pireneny,… Tonga amin’ilay hira isika hoe : “fafafafao ny tokotany fa hitsena vahiny”. Hahita ny tena marina tokoa eto Madagasikara mety azo hakana tohana sy torohevitra amin’i Rwanda eto ary ve ilay vahiny manan-kaja sa izy handrandrana indray no hanafenana loha sola ? Zava-dehibe ilay fiomanana, saingy tsy tokony ho lasa haingo ambony tsikoko fotsiny. Mendrika halain-tahaka i Paul Kagame ary eken’izao tontolo izao teny. Nahavita nampiombona sy nampandroso an’i Rwanda avy potiky ny fifamonoana tany amin’ny taona 90 ka nahafatesana 800 000 tany ho any, na avy tao anaty milisy sy nitarika ady aza izy. Azo tarafina sy hakana lesona ny zavatra nataony, ary tsy mahamenatra mihitsy ny manovo traikefa aminy, fa tsy sanatria hanaovana “marketing politique” na hakana doka fotsiny fahatongavany eto.